CrankWheel: Bypass Scheduling uye Kurodha pasi Neiyo Pakarepo Bhurawuza-Yakavakirwa Madhimoni | Martech Zone
CrankWheel: Bypass Scheduling uye kurodha pasi Neiyo Instant Bhurawuza-Yakavakirwa Madhimoni
Chipiri, February 16, 2021 Chipiri, February 16, 2021 Douglas Karr
Kukurukurirana kwese kunodikanwa pakati petarisiro uine chinangwa chekutenga uye kugona kwechikwata chako chekutengesa kuvabatsira kutendeuka kungangoderedza mikana yekutendeuka. Izvi zvinosanganisira nguva yekupindura, nhamba yekudzvanya, nhamba yezvikwiriso, nhamba yezvinhu zvemafomu… zvese.
Vashandi vekutengesa vandinoziva vanongoda kuwana pamberi pechinotarisirwa. Ivo vanoziva kuti kana vangogona kutaura kune iyo tarisiro, vakaziva dambudziko ravo, uye vovafamba nemhinduro… ivo vanonyanya kushandurwa kuva mutengi.
Makambani mazhinji anoita kuti chiitiko ichocho chityisa, zvakadaro. Isu tinovaita kuti vazadze pre-qualification mafomu, tinovaita kuti vakumbire ruzivo, isu isu tinoronga avo pachavo madomendi… uyezve isu tinoshamisika kuti kugona kwedu kuwana vanokwanisa kutungamira pamusoro pedu rekutengesa dhipatimendi kune kwakashata kutendeuka mwero.
CrankWheel Instant Madhimoni
Ko kana, uine munda mumwe chete, iwe unogona pakarepo kuendesa chikumbiro chetarisiro kunhengo yakavhurika yekutengesa timu? Iwe unongokumbira yavo nhamba yefoni, nhengo yekutengesa inovabatanidza… uye pasina chero software kurodha pasi kana mamwe matanho… vanogona kutanga kuratidza chigadzirwa chako kana sevhisi?
CrankWheel Instant Madhimoni ndiyo mhinduro. Vatungamiriri vekutengesa kutenderera pasirese vanoshandisa CrankWheel kuti vagovane ipapo skrini yavo netarisiro - hapana kurodha kunodiwa Uchishandisa yavo Chrome Kuwedzeredzwa, yako yekutengesa timu inogona kuratidza yako tarisiro yako skrini pane chero yavo nhare mbozha kana desktop mune isingasvike gumi masekondi.
Kwete izvozvo chete, nekuti vari kugovana nhamba yavo yefoni… CrankWheel inoedzawo kuziva uye kudzosa data rakakosha pane iyo tarisiro kuitira kuti iwe uve nemusoro wekutanga pakunzwisisa kuti ndivanaani, kambani yavo, uye kana vangangodaro inokodzera semutungamiri.
Munguva yemisangano yangu yezuva nezuva netarisiro, ini ndinoshandisa CrankWheel kuratidza yedu webhu saiti. Zvinondibatsira chaizvo kuratidza maficha nekukurumidza uye pasina kuisa chero chirongwa pakombuta yekutarisira.
Quentin Roquet, CEO weProgenda
CrankWheel Zvimiro uye Bhenefiti
Vashandisi veCrankWheel varikuona kuwedzera makumi maviri nemaviri muhuwandu hwema demos ivo vari kukwanisa kutanga kuvonga kune Instant Demos.
Kukurukurirana kutungamira kubatwa - Tora zvimwe zvinotungamira nekutenda zvizere mafomu ekutaurirana aunogona kudonhedza pawebhusaiti yako kana mumakambani e-mail. Pakarepo zivisa kutengesa reps nezve online tarisiro yakamirira kufona, pa-skrini, uye nemeseji meseji.
Kutungamira kufambisa - Ita zvinoshanda zvekushomeka kwekubata ruzivo nekuripfumisa neruzivo rwakakodzera senge nzvimbo, kambani, zvemagariro zvisungo etc. Gadzira yakazara CRM zvinyorwa uye uzive zvakawanda nezve yako lead.
kusangana - Pindura webhusaiti-inogadzirwa inotungamira ipapo pasina kubatanidza akawanda ekutengesa ekugonesa maapplication. Nyore wedzera a Ndidane izvozvi or Kumbira Demo bhatani kune webhusaiti yako. Leads inogona kuyerera yakananga muCRM yako kana mamwe masisitimu uchishandisa imwe yeakawanda anowanikwa masanganiswa.
Gadzira Yemahara CrankWheel Instant Demo Akaundi
Kufamba-Kupfuura neCrankWheel Instant Madhimoni
Heino muongororwo vhidhiyo yemhinduro kubva kune vese tarisiro yemushandisi ruzivo uye neruzivo rwevatengesi timu. Yakanaka kwazvo!
Kuzivisa: Ini ndakabatana ne CrankWchitsitsinho.
Tags: kufona ikozvinochrome extensioncrankwheelcrankwheel pakarepo mademoCRMgoogle Chromepakarepo mademotungamira kusimudzirakumbira demodata yekutengesascreensharing